Dumarnimo "Feminism" - Land Of Punt
Nabi Maxamed scw ayaa inoo sheegay in Ibliis (Shaydaan) warbixin subaxeed/galabeed ka dhagaysto shayaadintakale ee u xilsaaran inay fasahadiyaan nabi Adam cs tafiirtisa. Dibindaabyada iyo dhibkaa Ibliis ladabasocdo biniadamka wuxuu bilaabmay markii loosheegay in nabi Adaan ka fadilanyahay Ibliis. Ibliis beenbuu usheegay Xaawo iyo Adam wuxuuna kasoo saaray gabadkoodi iyo bartii ay kaga adkaayen Ibliis oo janna ahayd wuxuuna layimi dunida oo cidaan xooglihi usiijoogo. Geeda/midhaha mamnuuca ka ahaa Ibliis uu Adaan siiyey in Xaawo looso maray iyo inkale dooda ayaa kataagan, sababtoo ah intaan Xaawo la abuurin Adaan keedka umma uusan dhawaan.
Ciidamada Ibliis dirsaday waxay soo bandhigaa wixii u qabsoomay maalintaa iyo habeenka. Iyagoo dabasocda cadaawadii dhexmartay Ibliis iyo awoowgeen Adaan. Shayaadiintu waxa usheegan Ibliis sidii ilmo Adan jidkii Alle uga oo ay ka dhigeen kuwo caasiyooba. Qaarbaa la sheeko yimaada sidii ay ugu guuleysteen inay qof muslim danbi u horseedan, inuu khamri cabo, wax xado, qof kale dilo ama beensheego. Intaas oo dhan marka uu maqlo wuxuu ugu jawaabaa waxba maydaan soo qaban. Iyagoo waji gabax meesha lataagan ayaa mid shayaadiinta kamid ahi lasoo booda anigu nin iyo ooridii ayaan soo kala furay’. Ibliis, shaydaankaas kaladiray qoys wuu soo dhaweeyaa oo casuumaa, darajadiisana kor u qaadaa.
In naf laqaado ama dambi kale la sameeyo Alle waa waa xaaraantimeeyey, laakiin in laba qof oo isqabay isfuraan xaaraan maaha. Hadaba haddaanay xaaraan ahayn muxuu Ibliis ugu farxayaa qoyskan kala tagay ayey iswaydiintu tahay? Waxa ay jawaabtu tahay unuga ugu yar ee bulsho ka asaasanto tahay qoyska. Qoys hadii la kala kaxeeyo waxa burburaya asaaska bulshada. Hadii meesha lagasaaro qoyska waxaa kuxiga in bulshada oo kakooban qoysas isutagay ay burburto. Burburka bulshada waxaa kuxigta in nadaamka amase dawlada ay wadadhisteen khalkhal kuyimaado oo ay sababto in burbur guud kuyimaado nadaamka heshiiska laguwada ahaa oo ay meesha kabaxdo cadaaladu, wax wadalahaansha iyo inlawaayo kaladanbayn oo fawdo timaado. Waxaad mooda inuu Ibliis meel fog wax ka eegayo oo halka duunba yaryar ee dhacda uu diirada ku hayo arinkasii weyn.
Magaca ‘Shaydaan’ marka lamacneeyo wuxuu noqonaya kacdoon hurriye; diimo iyo kacdoon ayuu kala horyimi Ilahaay cw waana takeentay in laftarkiisa oo samada dhexmaxaasha albaabka laga xidhay. Hadii malaaigtu abaabul, kaladanbayn iyo qorshe ku shaqayso Iblis/Shaydaan cawajka ayuu kadoorbiday inuu ushaqeeyo. Wuxuu kadoorbiday inuu dagaal ku qaado wax alaale waxii layimaada kala danbayn iyo nadaam lagu wadakalsoon yahay. Hadii xoriyad lahelo oo ninkastaa tiisaraaco oo isdhexyaac yimaado waxa fududaanaysa in qof walba Ibliis cidla ka helo sidii dhacday markii uu Ibliis iskudiray Haabil, Qaabil iyo aabahood Adam cs; uu Qaabil cidlada ulabaxay ee isagu aabe, macalin, wadaad iyo jihiiyeba unoqday. Yaan cidla lagaahelin ayey Soomalidu tidhaah. Hadii qoyska lakala firdho oo islaanta guriga lagu mashquuliyo odaygana dibada lootuuro waxaa hubaal ah in caruurtuna suuqa galay.
Dunida dagaalo wajiyo badan leh ayaa kajira oo ama toos laysu weerarayo ama layskusoo qaadayo dagaal qabow “social engineering” dhamaantood biyo shubkoodu yahay in ummad jirta in la burburiyo oo la abuuro jawi isdhexyaac “anarchism”.
Nick Rockefeller, oo kamid ah raga ugu hantida badan dunida asal ahaana ka soo jeeda Yuhuudda kuwooda shayaan caabudka kana tirsan sahyuuniyadda (Zionism) ayaa isagoo u waramaya nin la odhan jiray Aaron Russo oo wariye ahaa u sheegay in “Rockefeller Foundation” taageertay dhaqdhaqaaqyadii Xorriyad-doonka ee Dumarka Maraykan 60-70kii. Wuxuu u raaciyey sababta ku kaliftay “Rockefeller Foundation” taageerto dhaqdhaqaaqyada noocas ah, waxaanu kaleenahay laba ujeedo:
Wuxuu tilmaamay “Nick Rockefeller” in dumarka mareekanka kunool ay yihiin kala badh bulshada mareekanka lakinse aan faa’iido nagasoo gelin sidaa la’ajligeed waa inla cashuura dumarka oo ay shaqeeyan oo cashuurta bixiyaasha kamid noqdaan. Sababata koobad ee aanu utaagerno dhaqdhaqaaqyadaa Xornimo-doonka Dumarka Maraykan sidaa ah.
Arinta kale ee aanu utaagerno xornimada doonka dumarka; waa caruurta oo aanu doonayno inanu kalawareegno lamaanaha, waa inanay jirin qoys dhamaystiran oo ubad wax isweydiiya leh. Nick, wuxuu yidhi siloohelo qorshewaara oo aanu ku adoonsano biniadamka waa in caruurtooda laga hoos saaro oo qoys kale loosameeyo, hadii dumarku shaqo-galaan waxaa noo fududaandoonta inaanu caruurta meelo lagu barbaariyo iyo iskuulo geyno. Qorshahaasu wuxuu noo saamaxaya inaanu kaga xoog badano caruurta waalidkooda oo aanu anagu barbaarsano. Qoys, waxaa unoqondoona macalimiinta iskuulada iyo dawladda. Waalidkooda waxay u arkidoonan inay ka fiicanyihiin kana aqoon badanyihiin arinkaasuna wuxuu horsed unoqondoona burburka qoyska.
Waxay mooda inaanay war isuhayn dumarka xornimadoonka ah iyo qorsheyaasha loodhigay ee lagudoonayo in lagu adoonsado. Bal aan idinla wadaago hadalo ay yidhaahdeen dumarka aminsan afkaarta Feminism-ka.
1. “Waxaan rajaynaynaa in sanadka 2000 aanu caruurtayada ku korin doono iyagoo aaminsan awoodda Bani’aadminimo, isla markaana diiddan awoodda Alle” Gloria Steinem, Leader of American Feminist Movement. Falsafada dumarka guryaha lagagasoo saaray ayaa ku salaysan in Ilaahay raga uga hiiliyey dumarka.
2. “Inkastoo uu guurku yahay addoonsiga dumarka, waxa iska cad in ujeedada dhaqdhaqaaqyada dumarku uu awoodda saarayo in la weeraro qoyska, xoriyadda dumarkuna ma hirgeli doonto hadii aan la burburin guurka” Sheila Cronin, A Radical Feminist Leader.
3. Baaqa Caalmiga ah oo Feminism-ka dunida mudaharaada soo saaren sanadkii 1971 ayaa sidan udhignaa “In la dabargooyo guurku waa ujeeddooyinka biyo kama dhibcaanka ah ee dhaqdhaqaaqa Xoriyadda Dumarka, sidaa darted; waxa muhiim noo ah in aaynu dumarka ku dhiiri-gelinno inay isaga tagaan/haajiraan raggooda, isla markaana waa in taariikhda dib loo qoraa oo dumarku ku noqdaan Faalisooyinkii iyo Sixiroolayaashii ay ahaan jireen“
Markaad intaas oo dhan isu-geyso waxaa kuu soo baxaya in caruurta iyagoo aad u yaryar dugsiyo lagu daro isla-markaana manhajka ay bartaan aanu ahayn mid si sax ah loo sameeyey marka layska taago dhinac diinta. Macalimiinta u dhigtaana ay yihiin dad aynaan isku dhaqan iyo diin midna ahayn. Waxana intaa dheer, in manjahka caruurteena dalka lagu baro uu kamid yahay manhajka Skanneterianka ee UNCEF dalka keentay nuxurkiisuna yahay in lasoo saaro arday sidata afkaar meelkale lagasoo waariday kuna burugaraamsan afkaarkale dunida dhinackaliya ka aragta.
Waxaynu ka warhaynaa in afkaarta dumarnimada lagu xoojinayo ee laynagusoo dhextuuray hadaf dibayaal oo qoyskasta inan hayad looga shaqaalaysiiyey. Waxaynu kaloo ka warhaynaa in dumarnimada lagu xoojiyo siminaaro “Empowering women” hudheelada lagu qabto xaflado wajibadan leh iyagoo ugusoo gabanaya inay qoyska xoojinayaan. Hadii ay ka dhabtay inay xoojiyaan reerka reer waxay mawduuca u rogilahaayen xoojinta qoyska “Empowering family” lakinse hadafkooda ayaan ahayn reer laxoojiyo lakinse in la burburiyo.
Markaad aragto qof dumar ah oo meelaha ka sheeganaysa inay yihiin xornimodoon “Feminist” waa laba mid uun, in aanay fahminba waxa Feminism-ka loolajeedo iyo inay cidkale ka barbar hadlay.
Waxa muhiim ah in caruurta wax barashadooda lalasocdo siiba kuwa khaaska looleyahay iskuulada, kahor iskullka in caruurta tarbiyad Islaamiga loosameeyo diintana lagu barbaariyo. Iskuulada waa in lalasocdaa qaab dhismeedka wax barashada loo sameeyo ee caruurta lagu barbaariyo. Caruurtu waa inay dareento inay xor kayihiin maanka oo aan lagu wareerine bug iyo qalin ee loo ogolaado in ilmuhu fikiro “logic thinking” oo uu cabbiro waxyaalaha ku hareeraysan.
dumarnimo feminism iskuulada shuuciyada waxbarasho